अनौठो संसार यी सुन्दरी युवतीले कुकुरसँग नियमित यस्तो गर्न थालेपछि… – Sanjal Nepal
Homeसमाचारअनौठो संसार यी सुन्दरी युवतीले कुकुरसँग नियमित यस्तो गर्न थालेपछि…
November 21, 2020 admin समाचार 4886
काठमाडौ । विश्वका कुनै–कुनै घटना अत्यन्तै अपत्यारिला छन् । अहिले फेरी सुन्दर देखिन एउटी युवतीले गरेको हर्कत चर्चामा छ । हुन छ युवतीहरु आफ्नो सुन्दरताको लागि केसम्म गर्लान्रु डाइटिङ गर्लान्, महँगो सामान प्रयोग गर्लान्। यी त सामान्य भए। तर अमेरिकाकी एक युवतीले सुन्दर देखिनको लागि कुकुरको पिसाब पिउने गर्छिन्। राम्री देखिनको लागि आफूले दैनिक कुकुरको पिसाब पिउने गरेको उनले बताएकी छिन्।
लिन नाम गरेकी ती सुन्दरीलाई लामो समयदेखि धेरैजनाले उनको सुन्दरताको कारण सोधिरहेका थिए। त्यसको जवाफमा उनले आफूले दैनिक रुपमा कुकुरको पिसाब पिउने गरेको बताइन्। यसको प्रयोगले पिम्पलहरु नआउने र स्किनलाई चम्किलो राख्ने उनले बताइन्। लिनले पार्कमा लगेर कुकुरलाई पिसाब गराउने र त्यो जम्मा गरेर पिउने गरेकाृे बताइन्।
अनुहार चम्किलो बनाउनको लागि उनले सधैँ आफ्नो कुकुरको एक कप पिसाब पिउने गर्छिन्। उनी भन्छिन, ‘कुकुरको पिसाबबाट भिटामिन ए, भिटामिन ई र १० ग्राम क्यालसियम प्राप्त हुन्छ। यसले क्यान्सर रोग लाग्नबाट बचाउँछ।’
कहिल्यै पनि नछुनुहोस् आफ्नै श्रीमतीकापनि यी अंग, नत्र जीन्दगी… !
November 11, 2020 admin समाचार 4697
दोलखा जिल्लामा अवस्थित पर्यटकीय केन्द्र जिरीले आ फ्ना छुट्टै बिशेषता बोकेको छ । राजधानी काठमाडौंबाट १ सय ८८ किलोमिटर दुरीमा रहेको जिरी अरनिको राजमा र्गको खाडीचौरबाट १ सय १० किलोमिटर टाढा पर्छ । तामाकोशीको गडगहाडट,
विवाहको रात से क्स भएन तर अन्य धेरै कुरा भए….
December 22, 2020 admin समाचार 2567
दुई वर्ष पहिले मैले आफैंसँग विवाह गरें । विवाहको दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा उत्कृष्ट दिन थियो । म विन्टेज गाउनमा थिएँ र रसाएका परेलीले मेरो पिताले मलाई विदाई गरेका थिए । मेरा थुप्रै साथीहरु विवाहमा
न्यू इयर पार्टीमा सा’मूहिक ब’ला’त्का’रपछि एयरहोस्टेसको मृ’त्यु, होटलको बा’थटबमा ला’श
January 5, 2021 admin समाचार 2808
२१ पुष २०७७, मंगलवार काठमाडौं। नयाँ वर्षको अघिल्लो रात ‘न्यू इयर इभ’ पार्टी मनाउन साथीहरुसँग गएकी एक एयर हो’स्टेसको सा’मूहिक ब’ला’त्का’र’का कारण मृ’त्यु भएपछि यो विषयले सामाजिक संजालमा ठूलो त’रंग ल्याएको छ । फि’लिपिन्सकी यी
LEX 18 agenda conversation: Job club (544568)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (515019)
Hello world! (435988)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (398435)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131864)
पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् बैशाख २० गते सोमबारको राशिफल (108999)
Technology Training Company Coding Dojo to Open Boise Campus at Trailhead (107073)